Visionox wuxuu soo bandhigayaa taleefan gacmeed isku laabma iyo guddi AMOLED oo duub ah | Androidsis
Bandhigga XNUMXaad ee Teknolojiyada iyo Codsiyada Shirka Caalamiga ah ee Warshadaha Muuqaalka, Visionox waxay soo bandhigtay noocii ugu horreeyay ee casriga ah ee shaashadda shaashadda AMOLED.
Visionox taleefanka gacanta ee isku laaban wuxuu adeegsadaa shaashad 6.47-inch shaashad ah oo qafiif ah oo loo yaqaan 'AMOLED shaashad leh teknoolojiyada isdhexgalka taabashada ee unugga' Visionox cell ', taasoo yareyneysa dhumucda shaashadaha jilicsan ee dhaqameed 30%, sida ay sheegtay isla shirkadda.
Visionox's taleefanka casriga ee isku laaban oo jilicsan ayaa qaatay a Lakabka dhexdhexaadka ah iyo qaabeynta is-dhigista ee isku laaban kara gudaha (180 darajo). Gacan gacan shaashadda shaashadda waa 2.5mm iyo terminal qaadataa dhumucdiisuna 13.3mm ka dib markii laab.
Visionox waxay tiri "Crescens flexion AMOLED ultra-thin folding handheld" waxay aqbashaa nidaamka isku-laabashada gudaha ee nooc-biyoodka ah. Dhanka kale, ayuu yiri oo muujiyey taas ma laha calaamado iyo raad raad shaashad markii la furo, laakiin tani waa wax aad sifiican u turxaan bixin doontid markii ugu dambeyn sheyga la soo saaro.
Ku saabsan guddiga soo-saarista AMOLED, Visionox waxay muujisay guddi dabacsan oo lagu rogi karo gacan 7mm ah. Intaa waxaa sii dheer, gudigu wuxuu ku dhexjiraa qolka unugga iyo farsamada soo bandhigida iskeed ah. Si kastaba ha noqotee, noocyadan gaarka ah ayaa wali ka fog in lagu hirgeliyo badeecad kama dambeys ah, sidaa darteed shirkaddu waxay muujisay kaliya shaashadda lafteeda iyada oo aan lagu dhufan taleefan dhab ah.
Isku soo wada duub guddiga AMOLED ee ay leedahay shirkadda 'Visionox'
Way cadahay in, markii waqtigu idlaado, aan sii wadi doonno inaan aragno aalado casri ah oo badan iyo noocyada noocyadan oo leh shaashado jilicsan. Waa mid ka mid ah isbeddellada cusub ee mustaqbalka sii xoogaysan doona. Waqtigan xaadirka ah, taleefannada casriga ah ee horeyba loogu sii daayay sidan oo kale suuqa oo laallaabi karo ayaa ah Samsung Galaxy Fold, Huawei Mate X iyo dhawaanahan Motorola Razr.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Visionox waxay soo bandhigeysaa taleefan casri ah oo isku laaban iyo duubista AMOLED